रंग विरंग Archives - ramechhapkhabar.com
टिकटक लाइभलाई लिएर राजेश हमालले फ्यानलाई किन दिए यस्तो प्रष्टीकरण ?
२१ वैशाख, काठमाडौं । केही सातादेखि ‘राजेश हमाल अफिसियल’ ह्यान्डलको टिकटक एकाउण्टबाट दिनहुँजसो लाइभ पोस्ट आइरहेको छ । मध्यरातसम्म चल्ने उक्त लाइभ स्ट्रिमिङमा राजेश हमाल र उनकी पत्नी मधु आउँछन् र दर्शकसँग अन्तक्रिया गर्छन् । उक्त लाइभमा फ्यानहरुले गिफ्ट पनि पठाइरहेका हुन्छन् । हमाल...
विवाहको ११ दिनमै किन अमेरिका उडिन् केकी ?
१९ वैशाख, काठमाडौं । हरेक जोडीहरू विवाहपछि बढीभन्दा बढी समय एकसाथ बिताउन चाहन्छन् । त्यही भएर हनिमुनको प्रचलन चलेको हो । तर, सबैले यस्तो समय निकाल्न सक्दैनन् । नायिका केकी अधिकारीको हकमा त्यही भएको छ । उनी हनिमुन मनाउन नभ्याईकन श्रीमानसँग केही दिनका लागि...
पललाई भेटेपछि दुर्गेश भन्छन, ‘साँढेको जुधाइ बाछाको मिचाइ झैँ भयो । म बहकिएँ । मेरो पलप्रतिको प्रेम उस्तै छ ।’
१९ वैशाख, काठमाडौं । अभिनेता पल शाह प्रकरणमा गायक दुर्गेश थापाको नाम मुछियो । यसको प्रभाव यतिसम्म पर्यो कि उनलाई मेला–महोत्सवमा बहिष्कार गरियो । कार्यक्रममा बोलाउन छोडियो । उनी घरमै थन्किए । तर, दुर्गेशले आफ्नो तर्फबाट कुनै पनि अभिव्यक्ति दिएनन् । पछिल्लो अवधिभर मौन...
गायिका समिक्षा अधिकारीको भावुक स्टाटसः तिम्रो लागि सँधै म हार्न सक्छु
१५ वैशाख, काठमाडौं । पछिल्लो समय यौन दुर्व्यवहारको घटनालाई लिएर समिक्षा अधिकारी चर्चामा आइन्। उनको पक्ष र विपक्षमा उत्तिकै मानिसहरु देखिएका थिए। तर पहिले दुर्व्यवहारको आरोप लगाएकी उनले र उनका परिवारले बयान फेरेसँगै सो घटनाले नयाँ मोड लिएको छ। सो विषय किनारा लागेको छैन।...
समीक्षा अधिकारीले लेखिन यस्तो भावुक कवितात्मक स्टाटस….
१५ वैशाख, काठमाडौं । दुई महिना ११ दिनपछि गायिका समीक्षा अधिकारीले आफ्नो भेरिफाइड फेसबुक पेजमा बिहीबार बिहान पोस्ट गरेको स्टाटस हो यो । गत १७ फेब्रुअरीमा उनले आफू अभिनित गीत ‘ढाकाटोपी शिरमा रिबन’ सेयर गरेकी थिइन् । समीक्षाको पछिल्ला स्टाटसले एकैसाथ प्रेमका धेरै आयाम...
नवविवाहित वर्षा जोडी हनिमुन मनाउन पोखरा
१४ वैशाख, काठमाडौं । बैशाख ९ गते अमेरिका बस्दै आएका इन्जिनियर आशीष गेलालसँग लगनगाँठो कसेकी अभिनेत्री वर्षा सिवाकोटी हनिमुन मनाउन पोखरा निस्किएकी छन् । वर्षाले सामाजिक सञ्जाल इन्स्टाग्राममा स्टोरी सेयर गर्दै श्रीमानसँग पोखरा गएको जनाएकी छन् । स्टोरी सेयर गर्दै वर्षा लेख्छिन्, ‘आफ्नी श्रीमतीसँग...
साउथकी सुन्दरी अभिनेत्री रश्मिकाले कति लिन्छिन् पारिश्रमिक ?
१२ वैशाख, काठमाडौं । दक्षिण भारतीय फिल्मकी अभिनेत्री रश्मिका मन्दनाको सुन्दरताको चर्चा सामाजिक सञ्जालमा हुने गरेको छ । गुगलबाट ‘नेसनल क्रस’ को उपाधि समेत पाएकी रश्मिकालाई गीता गोविन्दम फिल्मले अगाडि ल्यायो । फिल्मको गीत हिट हुँदा उनको सुन्दरताको पनि उत्तिकै चर्चा भयो । पछिल्लो...
वर्षा सिवाकोटीले पनि गरिन् सुटुक्क विवाह, को हुन श्रीमान ?
९ वैशाख, काठमाडौं । अभिनेत्री वर्षा सिवाकोटीले पनि विवाह गरेकी छन् । उनको शुक्रबार रेसु भिल्लामा विवाह गरेकी हुन् । अभिनेत्री सिवाकोटी अमेरिकामा बसोबास गर्दै आइरहेका पेशाले इन्जिनियर आशिष गेलालसँग विवाह बन्धनमा बाँधिएकी हुन् । अभिनेत्री केकी अधिकारीले जस्तै उनले पनि आफ्ना नजिकका परिवारका...
विवाह तस्बिर सार्वजनिक गर्दै केकीले भनिन्, ‘आशीर्वादको अपेक्षा राखेका छौँ’
८ वैशाख, काठमाडौं । अभिनेत्री केकी अधिकारीले वैवाहिक जीवनमा बाँधिएकी छिन् । अभिनेत्री अधिकारीले बुधबार व्यवसायी रोहित तिवारीसँग वैवाहिक जीवनमा बाँधिएकी हुन् । जानकारी अनुसार अभिनेत्री अधिकारी र ब्यवसायी तिवारीले सानो पारिवारिक जमघटमा विवाह गरेका हुन् । विगत केही समयदेखि प्रेममा रहेका यो जोडीले...
123 … 16 पछिल्ला »